Donald Trump oo xilkii ka eryay madaxii hay’adda dambi baarista ee FBI-da Mareykanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Donald Trump oo xilkii ka eryay madaxii hay’adda dambi baarista ee FBI-da Mareykanka
Wareegto uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayuu xilkii uga eryay madaxii hay’adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da James Comey, kadib markii uu ku eedeeyay in xilligaan aanu awood u laheyn inuu hoggaamiyo hay’addaas.
Tallaabadaan uu qaaday madaxweyne Donald Trump oo dood weyn ka dhalisay Mareykanka ayaa ah tii ugu horeeysay ee ka dhacda dalkaasi, waana markii labaad uu madaxweyne Mareykan ah xilka ka qaado madaxii FBI-da, kadib madxweynihii hore ee Richard Nixon oo isaguna isku casilay fadeexadii Watergate sanadkii 1973-ka.
James Comey ayaa muddooyinkii dambe waday baaritaano la xiriira suurta-galnimada in Ruushku uu xiriir la yeeshay xubno ka mid ahaa ololahihii doorashada ee Donald Trump oo uu gacan ka siiyay inuu doorashadaasi ku guuleysto.
Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbaday in guddi gaar ah oo baaritaan ku sameeya arrintaasi la sameeyo, taas oo la xiriirta kaalintii Ruushka ku yeeshay doorashadii uu ku guuleystay Donald Trump.
James Comey ayaa waxaa xilkaan muddo 4 sano kahor u magacaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Barack Obama, waxaana intii uu xilkaasi haayay qaaday tallaabooyin si aad ah uga careeysiiyay xisbiyadda Jamhuuriga iyo dimuqraadigaba.